आफ्ना ट्याक्सीहरु नभएको यातायात कम्पनी 'उबर' (Uber), आफ्ना घर/होटलहरु नभएको तर घर भाडामा दिने कम्पनी 'एयर बि एन बी' (Airbnb) आदि 'अन डिमान्ड सर्भिस' (चाहिएको बखत तुरुन्तै सेवा) दिने कम्पनीहरुले अहिले विश्व बजारमा तहल्का मच्चाइरहेका छन् । आफैँ खाना नबनाउने तर विगत १ सय २५ वर्ष देखि आफ्ना ग्राहकलाई निरन्तर खाना ख्वाँउदै आइरहेको कम्पनी 'मुम्बई डब्बावाला'ले पनि आफ्नो सेवाबाट सबैलाई चकित तुल्याउँदै आएको छ ।
मुम्बई डब्बावालाका डा. पवन अग्रवालको कुरा मान्ने हो भने, न त डब्बावालाहरु पढे लेखेका छन्, न त प्रविधिकै उपयोग गर्छन् तर निरन्तर १ सय २५ वर्ष देखि काम गरिरहेकाछन्, न त कहिले डब्बा साटिन्छन्, न त डब्बावालाहरु ढिलो नै पुग्छन्, न त कहिले काम नै रोकिएको छ, डब्बावालाहरु कामलाई 'भगवान' मान्छन् ।
को हुन् मुम्बईका डब्बावाला?
मुम्बई सहरमा, बिहान घरमा बनेको खाना, दिउँसो अफिसमा पुर्याउने व्यक्तिहरु डब्बावाला हुन् । अफिसमा काम गर्ने धेरैजसो व्यक्तिहरु घरकै खाना खान रुचाउँछन्, तर उनीहरुको अफिस २-३ घन्टा रेल चढेर जानुपर्ने हुन्छ । अत: ९ बजे अफिस पुग्न, धेरै कर्मचारीहरु बिहान ६-७ बजे निस्केर मुम्बईको लोकल रेल चढ्छन् । स्वभाविक कुरो, बिहान ६ बजे कसैको घरमा खाना बनाउने कुरा भएन, त्यसमाथि अफिसमा खाना खाने समय दिउँसो १२-१ बजे हुन्छ, अत: खाना बिहानै बने पनि, लिएर जाने कुरा भएन । अर्को कुरा चाँहि, मुम्बईका लोकल रेलहरु, यहाँका माइक्रो र बस भन्दा पनि धेरै भिडभाड हुन्छ। यही खानाको समस्यालाई डब्बावालाहरुले समाधान गर्दै आएका छन् ।
डब्बावालाहरुले बिहान ९-१० बजेबाट कर्मचारीहरुको घरबाट खाना जम्मा गर्न थाल्छन् (खाना टिफिन बट्टा / डब्बामा राखिएको हुन्छ, अत: त्यो डब्बा बोकेर हिँड्ने डब्बावाल भए) । अनि जम्मा गरिएको खानालाई रेल मार्फत अर्को स्टेशनमा लगिन्छ, कुन डब्बा कता जानुपर्ने हो, त्यही अनुसार डब्बाहरुलाई बर्गिकरण गरिन्छ । डब्बा बर्गिकरण गर्नलाई उनीहरुको आफ्नै कोडिङ सिस्टम छ । ५ हजार जना डब्बावालाहरुले दैनिक ६०-७० किलोमिटर यात्रा गर्दै २ लाख खानाका डब्बाहरु ओसारपसार गर्छन् । रमाइलो र अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने, उनीहरुको काम गराइ शत प्रतिशत छ, गल्तिले डब्बा साटिने, अर्को ठाउँमा पुग्ने, हराउने हुँदै हुँदैन ।
हिजो काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा, मुम्बई डब्बावालाका डा. पवन अग्रवालको कथा सुन्न पाउने मौका मिल्यो । डब्बावालाको काम गर्ने तरिका, तारिफयोग्य छ । मुम्बई डब्बावालाबारे जानकारी लिन तलको भिडियो हेर्नुहोला ।